काठमाडौंको न्युरोड गेटमा घट्यो अनौठो घटना , जे न हुनु थियो त्यही भयो ? – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौंको न्युरोड गेटमा घट्यो अनौठो घटना , जे न हुनु थियो त्यही भयो ?
admin August 14, 2021 समाचार Leaveacomment 143 Views
काठमाडौं – काठमाडौंमा प्रहरीको गाडीबाट हा’मफा’ले‍र एक जना थुनुवा फरार भएका छन् । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका थुनुवा निर्मल परियार काठमाडौंको न्युरोड गेटबाट भागेका हुन् जब र्ज’स्ती क रणीको आरोपमा पक्राउ परेका उनी महानगरीय प्रहरी वृत जनसेवाको नियन्त्रणमा थिए ।
यो पनि ,अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग खुल्यो लगातारको वर्षाका कारण पहिरो आउँदा अवरुद्ध भएको अत्तरिया स्याउले जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग पुनःसञ्चालन भएको छ । शुक्रबार साँझ डोटीको गैरा तथा डडेल्धुराको साहुँखर्कअन्तर्गत पर्ने उक्त राजमार्गको कटाल भन्ने ठाउँमा पहिरो आउँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो ।
Previous बलिउड अभिनेत्री करीना कपूरले यसकारण सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउन चाहन्थिन् तर
Next मेरो बैसाखमा बिहे फिक्स भएको थियो अर्को केटा कोठामा आएर…